ကိုယ်ချင်းစာတရားတွေလှိုင်လှိုင်ပြောပြီး စာနာစိတ်မရှိ တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ရှောင်တဲ့အကြောင်း ပြောလာတဲ့ ထူး အယ်လင်း – Cele Lover
ကိုယ်ချင်းစာတရားတွေလှိုင်လှိုင်ပြောပြီး စာနာစိတ်မရှိ တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ရှောင်တဲ့အကြောင်း ပြောလာတဲ့ ထူး အယ်လင်း
ပရိသတ်ကြီးရေ.. ဂီတလောကမှာ အသံပါဝါကောင်းကောင်းနဲ့ သီချင်းကောင်းတွေများစွာသီဆိုထွက်ရှိထားပြီး အောင်မြင်မှုတွေများ စွာရရှိထားတဲ့ အဆိုတော်အနုပညာရှင်တွေထဲမှာ ထူးအယ်လင်းကလည်း အပါအဝင်ပါပဲ..။
ထူးအယ်လင်းကတော့ လက်ရှိမှာ အနုပညာအလုပ်တွေနည်းပါးနေပေမယ့် ပရဟိတအလုပ်တွေလုပ်ဆောင်ကာ လိုအပ်နေတဲ့ပြည်သူ တွေအတွက် ဖေးမကူညီမှုတွေနဲ့အတူ လှူဒါန်းမှုတွေ ပြုလုပ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်..။
ထူးအယ်လင်းကတော့ ကိုဗစ်ပထမလှိုင်းနဲ့ ဒုတိယလှိုင်းတွေမှာလည်း ဆေးဝါးနဲ့လိုအပ်တာတွေ လှူဒါန်းသလို ဝေးလံခေါင်သီတဲ့ ဒေသ တွေ ကိုလည်း ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသွားရောက်ကာ ချို့တဲ့သူတွေအတွက် လှူဒါန်းမှုတွေ ပြုလုပ်နေတာလည်း တွေ့ရပါတယ်..။
၇သားသမီးတွေနဲ့အတူ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အလှူပုံရိပ်တွေကို အမြဲမျှဝေလေ့ရှိတဲ့ ထူးအယ်လင်းကတော့ ကိုယ်ချင်းစာတရားတွေကို လှိုင်လှိုင်ပြော ပြီး စာနာစိတ်မရှိတဲ့ ပတ်ဝန်းရှင်ကို ရှောင်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်း ရေးသားပြောပြလာပါတယ်..။
ကိုယ်ချင်းစာစိတ်မရှိတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ရှောင်တယ်….
လှသိန်း 😅..” ဆိုပြီး ထူးအယ်လင်းက ရေးသားပြောပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်..။
ပရိသတ်တွေကလည်း ထူးအယ်လင်းကို အားပေးနေကြတဲ့အကြောင်းတွေအပြင် စနောက်ထားကြသလို အစစအရာရာဂရုစိုက်ဖို့ကိုလည်း မှတ်ချက်တွေပေး ရေးသားထားကြလည်း တွေ့ရပါတယ်..။
ကိုယ္ခ်င္းစာတရားေတြလႈိင္လႈိင္ေျပာၿပီး စာနာစိတ္မရွိ တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ေရွာင္တဲ့အေၾကာင္း ေျပာလာတဲ့ ထူး အယ္လင္း
ပရိသတ္ႀကီးေရ.. ဂီတေလာကမွာ အသံပါဝါေကာင္းေကာင္းနဲ႔ သီခ်င္းေကာင္းေတြမ်ားစြာသီဆိုထြက္ရွိထားၿပီး ေအာင္ျမင္မႈေတြမ်ား စြာရရွိထားတဲ့ အဆိုေတာ္အႏုပညာရွင္ေတြထဲမွာ ထူးအယ္လင္းကလည္း အပါအဝင္ပါပဲ..။
ထူးအယ္လင္းကေတာ့ လက္ရွိမွာ အႏုပညာအလုပ္ေတြနည္းပါးေနေပမယ့္ ပရဟိတအလုပ္ေတြလုပ္ေဆာင္ကာ လိုအပ္ေနတဲ့ျပည္သူ ေတြအတြက္ ေဖးမကူညီမႈေတြနဲ႔အတူ လႉဒါန္းမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္..
ထူးအယ္လင္းကေတာ့ ကိုဗစ္ပထမလႈိင္းနဲ႔ ဒုတိယလႈိင္းေတြမွာလည္း ေဆးဝါးနဲ႔လိုအပ္တာေတြ လႉဒါန္းသလို ေဝးလံေခါင္သီတဲ့ ေဒသ ေတြ ကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်သြားေရာက္ကာ ခ်ိဳ႕တဲ့သူေတြအတြက္ လႉဒါန္းမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနတာလည္း ေတြ႕ရပါတယ္..။
၇သားသမီးေတြနဲ႔အတူ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အလႉပုံရိပ္ေတြကို အၿမဲမွ်ေဝေလ့ရွိတဲ့ ထူးအယ္လင္းကေတာ့ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားေတြကို လႈိင္လႈိင္ေျပာ ၿပီး စာနာစိတ္မရွိတဲ့ ပတ္ဝန္းရွင္ကို ေရွာင္တယ္ဆိုၿပီးေတာ့လည္း ေရးသားေျပာျပလာပါတယ္..။
ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္မရွိတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ေရွာင္တယ္….
လွသိန္း 😅..” ဆိုၿပီး ထူးအယ္လင္းက ေရးသားေျပာျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္..။
ပရိသတ္ေတြကလည္း ထူးအယ္လင္းကို အားေပးေနၾကတဲ့အေၾကာင္းေတြအျပင္ စေနာက္ထားၾကသလို အစစအရာရာဂ႐ုစိုက္ဖို႔ကိုလည္း မွတ္ခ်က္ေတြေပး ေရးသားထားၾကလည္း ေတြ႕ရပါတယ္..။
Previous Article ပုဒ်မ (၅၀၅) ထဲမပါတာနဲ့ပဲ သူမကို ဒလံမလို့စွပ်စွဲနေကြ တဲ့အပေါ် ထိထိမိမိတုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်
Next Article မနက်ခင်းအိပ်ယာနိုးနိုးချင်း လုံးဝ (လုံးဝ) မလုပ်သင့်တဲ့ အရာများ